Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : ramandiamananahelokaroaambinnyfolonatsymipepo
Entry Ramandiamanana: Heloka roa ambin' ny folo na 'tsy mipepo' (heloka, roa, amby, folo, pepo)
Author Ramandiamanana Alfred, 1923/02/23
Text Tonga eo am bavahady ny posy ka apetraky ny borizano. Iny mivoaka avy ao Ramatoa Ravoahirana, nitsipitsipika toy ny fandia-fasika nahazo remby, mivimbina ravin-damba sy haingon'akanjo avy novidina teny amin'ny magazain'larivo. " Tsy mbola tonga ihany angaha ny kalesin-dalamby avy any atsimo, hoy ny fanontaniany. Tsy andriko izany hiverenan-dRajao" ! Ndrematoa Rajao vadiny dia lasa hatry ny afak'omaly, fa Ingahy Rakotoasimbola anadahin-dreniny dia mpanankarena ngezalahy ao amin'ny tapany atsimo. Tsy mba niteraka izy ary tsy mba nanangan-jaza koa, nefa ny fahanterana sy ny fahosana mandroso isan'andro. Rajao no hany zana-kavany tandrifin'ny hatsangany; nefa sampona lava ny fanjanahany azy ara-dalàna, satria Rangahy moa zanak'antitra mararirarin'ny fandanian-karena foana;
Rajao tokony handova azy kosa, tanora fantezy tsy mitety ny lany sady ' fanteziam-piainana avo sasaka, satria izy sy Ravoahirana vadiny dia tena mpivady mifanara-tsaina tokoa, fa "tsy mipepo" ! hoy ny fitenin'ny lahy, " izay alehan' ny ory alehan'ny tsy manana " , hoy kosa ny fihenahenan'ny vavy, rehefa mifaninana amin'ny rendrarendrany isan-karazany izy.
Noho izany, dia nihevaheva lava teny ny fananganana an-dRajao. Tsaroan'ldadakoto mandroso ihany anefa ny fahosany, ka dia io izy nanafatra an-dRajao hianatsimo io. Tafaverina avy any Rf)-mose, ka izao no lanin-dresak'izy mivady:
-- Ravoah: Totoim-bintana inona re no tsy anarahana izany hevitra tena hendry izany e? lo loka io ihany izao tsy mba itoviana amin'olona izao.
-- Rajao: Tsy ho adalan-kaingo, hono, fa fotsy sy volontany no ampifandimbasina. Andro indraindray no mipaka lopotra ®.
Updated on 2017/06/22